यी हुन् माओवादीका प्रदेशसभा समानुपातिक सांसद: नेताका श्रीमती, छाेरी र बुहारी सम्म सूचीसहित -बिगुल न्यूज
यी हुन् माओवादीका प्रदेशसभा समानुपातिक सांसद: नेताका श्रीमती, छाेरी र बुहारी सम्म सूचीसहित
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभाका ३५ समानुपातिक सांसदकाे नाम छनाेट गरेकाे छ । खुमलटारस्थित अध्यक्ष प्रचण्डको निवासमा शुक्रबार दिउँसो बसेको पार्टी शीर्ष नेतृत्व र प्रदेश ईञ्चार्जहरुको बैठकले प्रदेशसभा सदस्यहरु अन्तिम टुङ्गाे लगाएकाे हाे । केन्द्रीय कार्यालय बैठकले समानुपातिकतर्फ ७ वटै प्रदेशका लागि ३५ जनालाई सांसद चयन गरेको माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषालले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार समानुपातिक सांसदहरुको नाम आजै निर्वाचन आयोगमा बुझाउने तयारी छ ।
नेताका श्रीमती, छाेरी र बुहारी बने सांसद
माओवादीबाट प्रदेशसभा सदस्य हुनेमा नेताका पत्नी, छोरीदेखि मन्त्रीका बुहारी सम्म रहेका छन् । पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माकी भाइ बुहारी विमला केसी पनि सांसद बन्ने साैभागय पाएकी छिन् । उनी शर्माकी जेठोबुवाको छोराकी श्रीमती हुन् । त्यस्तै काठमाडाैँ क्षेत्र नम्बर ६ बाट चुनाब हारेका झक्कु सुबेदीकी छाेरी भावना सुवेदी पनि प्रदेश सांसद बनेकी छिन् ।
नेताका श्रीमती पनि सामानुपातिककाे सूचीमा परेका छन् । प्रदेश ६ को समानुपातिकमा परेकी पुष्पा घर्ती विष्ट पूर्वसासद नरबहादुर विष्टकी श्रीमती हुन् । कृष्णा शाह अाचार्य नेता रामदीप अाचार्यकी श्रीमती हुन् । यस्तै सीता अधिकारी नेता महेश्वर दाहालकी पत्नी हुन् । सीता नेपाली पूर्व सांसद हुन् ।
नेकपा माअाेवादीबाट काे काे बने प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसद हेर्नुस् सूची:
२. कुशुमकुमारी श्रेष्ठ
प्रकाशित : शुक्रबार, पुष १४, २०७४१७:२०
विवादित अध्यादेश जारी भएपछि ओलीको आयो यस्तो कडा प्रतिक्रिया !
उमेर हदबन्दी गरेर स्ववियु निर्वाचन गर्न हुँदैन
किसुनजीको जन्मजयन्तीमा काँग्रेस र नेवि संघ सुधार अभियान शुरु
एमाले उम्मेदवार शेरधन राई सवार गाडीमाथि बम प्रहार, गाडी पूर्णरुपले क्षतिग्रस्त
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष बिजुक्छेबाट मतदान
वामदेवको गृहजिल्ला प्युठानबाट एमालेले भारी मतका साथ खोल्यो खाता !
चुनाव चिह्न नदिइनु संविधान विपरीतको काम:नयाँ शक्ति पार्टी